Ayax farabadan oo ku habsaday Warsheekh & degaano hoostaga - Awdinle Online
Ayax farabadan oo ku habsaday Warsheekh & degaano hoostaga
Wararka aan ka heleyno degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in Maanta degmadaas uu ku habsaday Ayax faro badan oo maalmihii lasoo dhaafay gaaray Gobolkaas.
Dadka deegaanka Warsheekh oo la hadlay Idaacadda Dalsan ayaa u sheegay inay arkayaan Ayax raxan raxan u socda oo soo gaarayay degmadaas, isla markaana uu kusii faafayo deegaano kale.
Sidoo kale Ayaxa ayaa ku habsaday dhul daaqsimeedyo ku yaalla deegaanada kala Bakaaroole, Shiiqyaale, Ruunsheeqow iyo deegaano kale oo dhamaantood hoostega Warsheekh, waxaana laga casbi qabaa inuu baabi’iyo dhul beereedyo kale.
Sawirro laga soo qaaday Ayaxa lagu faafiyay baraha Bulshada ayaa muujiyay in Ayaxa uu ahaa mid raxan raxan u socda, isla markaana qaar kamid uu dhulka kusoo dhacay, waxaana dadka ay sheegeen inay maqli jireen oo kaliya Ayaxa, hayeeshee ay arkeen.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa Ayaxa waxaa uu ahaa mid siweyn ugu soo badanayay deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan kuwa hoostega degmada Balcad, halkaas oo uu ku baabi’iyay beero farabadan oo ku yaallay halkaas.
Previous articleTaabit Cabdi oo farriin kulul u diray Madaxda Dowladda Soomaaliya
Next articleMusharixiinta Guddoonka Barlamaanka Hir-Shabeelle oo la diiwaan geliyay